Miyaad ku dhiiran lahayd inaad god ka sameyso AirTags-kaaga si aad ugu xirtid laalaadda? iFixit, haa | Waxaan ka socdaa mac
Iibinta Apple ee AirTags shaki la’aan guul weyn bay gaadhay. Marka lagu daro aaladaha laftooda shirkadda Cupertino waxay samaynaysaa lacag caddaan ah iyada oo ay ugu wacan tahay qalabkeeda si macquul ah ugu adeegta in lagu qaado AirTags meel kasta.
Tani waa wax ka soocaya wax soo saarka Apple waxyaabaha kale ee la midka ah waana in dalool aan lagu darin aaladda lafteeda si ay u laalaadaan, waxaa lagama maarmaan ah in la iibsado qalab haddii aadan haysan "jeeb" aad ku qaadatid. Laakiin iFixit wuxuu rabay inuu sameeyo tijaabada qodida mid ka mid ah AirTag-yada oo leh garaaca wadnaha oo aad u wanaagsan waana macquul adigoon dhaawicin.
Tan waxaan ula jeednaa inaan kugula talineyno daloolinta Apple AirTags? Maya, laakiin waxaa la yaab leh xoogaa in ka badan 1/4 inji oo ay ku guuleysteen inay daaqaan AirTag-yada oo si macquul ah ayay u sii wadaan inay shaqeeyaan iyagoo aan wax dhibaato ah qabin. Dabcan mooyee lumiso dhammaan iska caabbinta biyaha iyo boodhka ay qalabkani bixiyaan.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa la yaaban sababta Apple uusan u dooneynin inaad si toos ah u qaadatid AirTag-kaaga adigoon iibsan qalab, oo taasi waa sida saxda ah furaha halkaas, iibiso qalab loogu talagalay qalabkaaga oo aad kasbato lacag badan.
Waxaan horeyba u aragnay kala furfurida qalabkan maalmo ka hor oo ay fulisay shirkadda 'iFixit', taas gudaheeda waxaan ka helaynaa ikhtiyaarka ah in lagu duuduubo AirTag xoogaa yar oo lagu qaado kuma talinayno ikhtiyaarkan gabi ahaanba. Dhinaca kale, way iska cadahay in isticmaaleyaal badani ay dooranayaan ku dayasho ama keychains la mid ah inay aaladahaan u qaadaan meel kasta, waa wax Apple ay si dabiici ah u leedahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Miyaad ku dhiiran lahayd inaad god ka sameyso AirTags-kaaga si aad ugu xirtid laalaadda? iFixit, haa